SIYAASADDDA – Page 2 – Ikhlas Media Agency
Shirka Iskaashiga Soomaaliya iyo Beesha caalamka oo Muqdisho ka furmay
Dec 7, 2020 Madaxa Wararka
Raysul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa manta furay shirka Iskaashiga Soomaaliya iyo Beesha caalamka oo ay ka qeybgaleen Madaxda Federaalka, deeq bixiyaasha, Madaxda Maamul goboleedyada iyo Bulshada Rayidka. Shirka…
W.Arrimaha Dibada Sucuudiga oo Sheegay in heshiis laga gaaray godoomintii Qatar.
Dec 5, 2020 Madaxa Wararka
Wasiirka arimaha dibada ee Sucuudiga ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in heshiis iyo si afgarad laga gaaro wadahadalo la doonayo in lagu xaliyo xiisad ka dhex taagneyd dalal Khaliijka kuwaas…
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amar ku siiyay waaxda difaaca mareykanka in ay dib u dejin u sameeyaan Ciidamada Mareykanka ee laga soo saarayo Dalka Soomaaliya bilowga sannadka 2021 sidoo…
Dec 4, 2020 Madaxa Wararka
Tani iyo markii uu dagaalka ka billowday deegaanka Tigray ee dalka Itoobiya waxaa adkeyd in la helo xog rasmi ah oo ku saasban waxa ka socda gudaha Tigray maadaama ay…
Dec 3, 2020 Madaxa Wararka
Shiinaha ayaa 630 ka mid ah muwaadiniintiisa ka daad gureeyay gobolka ay colaaduhu saameeyeen ee Itoobiya ee waqooyiga gobolka Tigray kadib markii ciidamada dowladda federaalka ay bilaabeen duqeymo dhanka cirka…
Dec 2, 2020 Madaxa Wararka
Wasiir Sacuudiyaan ah ayaa Talaadadii ku dhalleeceeyey wasiirka arrimaha dibedda Iran inuu soo jeediyey in Riyadh ay kaalin ku laheyd khaarijinta saynisyahankii ugu sarreeyey Nukliyeerka Iran Mohsen Fakhrizadeh. Fakhrizadeh ayaa…
Sarkaal ka tirsan Maamulka Tigray oo gacanta lagu dhigay
War ay soo saartay Dowlada Itoobiya ayaa lagu sheegatay in ay gacanta ku dhigtay mid ka mid ah saraakiishii sarsare ee Ismaamulka Tigray ee Dalka Itoobiya ee dhawaan laga qabsaday…
DHABAR JABKA DP WORLD
Nov 27, 2020 Madaxa Wararka
Qoraa: Sharmarke Abdullahi Ali, Madaxa Xarunta Hormarinta Ganacsiga & Waxbarashada Capital Care.
Raysul wasaare Abiy Ahmed oo Caalamka ka codsday inay faraha ha kala baxaan xaalada Itoobiya
Nov 26, 2020 Madaxa Wararka
Waxaa xalay soo idlaaday waqti kama dambeysa ah oo ay dowladda Raysul wasaare Abiy Ahmed ee dalka Itoobiya ay u qabatay dagaalyahanadda xisbiga TPLF inay isku soo dhiibaan. Waxaa laga…
Dad ku dhintay dab ka kacay Isbitaal ku yaal Turkiga
Dowlada Soomaaliya oo ka digtay abaabul ciidan oo ay Kenya ka wado Xuduuda labada Dal.
Turkiga oo xiray dad lagu tuhmayo jaajuusiinimo
Dec 19, 2020 Madaxa Wararka